Dastabej » बाँकेका कुन पालिकाको कति बजेट ?
बाँकेका कुन पालिकाको कति बजेट ? – Dastabej
बाँकेका कुन पालिकाको कति बजेट ?
कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा प्राथमिकता
नेपालगन्ज । बाँकेका स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रमसंगै बिहिबार बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । पालिकाहरुले गरेको बजेट बिनियोजन यस्तो छ ।
आगामी आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ का लागि १ अर्व ५४ करोड ७७ लाख ११ हजार ३६२ रुपियाँको अनुमानित बजेट वजेट ल्याएको छ । बिहिवार नवौं नगरसभामा उपप्रमुख उमा थापा मगरले आगामी आर्थिकवर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो । बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख उमा थापा मगरले नगरका २३ वडाका लागि २८ करोड बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो ।नेपालगञ्जले आन्तरिक राजश्वको दायराम बढाई आन्तरिक श्रोत वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा लिई कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य रहेको जनाएको
छ । चालु आव २०७७÷७८ मा नेपालगञ्जको कुल बजेट एक अरब ४९ करोड ४२ लाख १७ हजार ५१० रुपियाँको छ । कोभिडका कारण गतवर्ष नेपालगञ्जले आन्तरिक आय लक्ष्य अनुसार उठाउन सकेको छैन । कर संकलनमा नेपालगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघसँग सहकार्य गरिने भएको छ । बजेटमा अनुमानित भन्दा बढि ब्यवसाय कर बृद्धि भएमा अनुमानित भन्दा बढि आम्दानी भएको रकमको २० प्रतिशत संघलाई आव २०७९÷८० मा अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराइने भएको छ । बजेटमा वहाल करमा छुट, अपांगता भएका ब्यक्ति, महिलाद्धारा सञ्चालित उद्योग व्यवसायमा कर छुटको नीति ल्याइएको छ । कोभिडका कारण स्वदेश फर्केका ब्यक्तिलाई ब्यवसायमा लाग्ने करमा समेत छुटको ब्यवस्था गरिएको उपप्रमुख मगरले जानकारी दिनुभयो ।
कोहलपुर नगरपालिकाले १ अर्ब १७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाजस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र भौतिक पुर्बाधारलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
खजुरा गाउँपालिकाले७५ करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ । पालिकाले लुम्बिनी प्रदेश स्तरीया विश्व बिद्यालय निमार्ण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका अलावा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखिएको गाउँपालिका प्रमुख किस्मतकुमार कक्षपतिले बताए । उनले भने, विकास निमार्णसंग खजुरालाई नमुना पालिकाकारुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिका
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले ८२ करोड ३८ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । शिक्षा तफए २८ करोड ९७ लाख, स्वास्थ्यमा ५ करोड ९१ लाख, कृषि ७८ लाख, पशुमा ६७ लाख र पुर्बाधार तर्फ २२ करोड १५ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको प्रमुख पशासकिय अधिकृत लोकबहादुर शाहीले जनाए ।
पालिकाले ४९ करोड १ लाख ४६ हजार रकमको आयव्यय विवरण भएको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । अनुदानतर्फ ११ करोड ५५ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ १९ करोड २ लाख, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ४ लाख, समपुरक अनुदानतर्फ ४९ लाख, प्रदेश सरकार समानीकरण अनुदान ५४ लाख ३८ हजार, प्रदेश सरकार सशर्त अनुदान ८५ लाख ४४ हजार, प्रदेश सरकार विशेष अनुदानतर्फ ६० लाख, प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान १ करोड ५० लाख र आन्तरिक श्रोत ५४ लाख ३० हजार हुने आय अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी व्ययतर्फ चालु खर्च ३० करोड ३ लाख ४६ हजार, पुँजीगततर्फ १८ करोड ९८ लाख गरी कुल जम्मा ४९ करोड १ लाख ४६ हजार हुने अनुमान गरिएको छ । कृषिमा १ करोड ३० लाख, पर्यटनमा १ करोड २० लाख, सामाजिक विकास(२० करोड १५ लाख, शिक्षा(१३ करोड ५६ लाख र स्वास्थ्यमा ५ करोड ६ लाख बजेट छुट्याएको छ । २५० जनालाई १०० दिन बराबरको रोजगारीको व्यवस्था गरने छ ।
बैजनाथ गाउँपालिकाले ६५ करोड ४३ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । गाउँपालिका प्रमुख मानबहादुर रुचालका अनुसार सामाजिक, आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा पारेको छ । पालिकाले भौतिक पुर्बाधारको विकास भन्दा पनि सामाजिक विकासमा बढी जोड दिइएको उनले जनाए ।
उक्त पालिकाले ६८ करोड ६३ लाख ११ हजार बिनियोजन गरेको छ । ७० बुंदे नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको पालिका प्रमुख नरेन्द्रकुमार चौधरीले बताए ।
दशौं सभाले आर्थिक बर्ष २०७८।२०७९ को नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत रुपमा विहिबार पारित गरेको छ । जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामनिवास यादवले सभा प्रस्तुत गर्नु भएको नीति कार्यक्रम सभाले सर्वसम्मत रुपमा पास गरेको जानकारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसबहादुर रानाले जानकारी दिए ।
१० असार २०७८, बिहीबार १८:५९ प्रकाशित